Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၂၂ရက်နေ့ တွေ့ခွင့်ရရန် ရှေ့နေများ တောင်းဆိုချက် ငြင်းပယ်ခံရ။....။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၂၂ရက်နေ့ တွေ့ခွင့်ရရန် ရှေ့နေများ တောင်းဆိုချက် ငြင်းပယ်ခံရ။....။
၄ရက်နေ့မှာ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက် ပေးရန်အတွက် အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက် နောက်ဆုံး အချောကို ကာယကံရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှအတည်ပြုပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မနက်ဖြန် ၂၂ရက်နေ့၌ တွေ့ဆုံခွင့် ပေးရန် တောင်းဆိုချက်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းက တွေ့ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်း အကြောင်း ပြန်ခဲ့တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
"ဒီနေ့ မနက်ဖြန်၂၂ရက်နေ့မှာ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက် နောက်ဆုံး အချောကို ကာယကံရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှအတည်ပြုပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။ မနက်ဖြန် တွေ့ခွင့်တောင်းတာကို အကျဉ်းဦးစီးဋ္ဌာနက ပြီးခဲ့တဲ့ ၁နာရီလောက်က ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ အကြောင်းပြန်လာတယ်။ အဲဒီ့အတွက်ကြောင့် လာမည့် ၂၄ရက်နေ့ နောက်ဆုံး လျှောက်လဲချက်ဟာ ကာယကံရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားဝင် အတည်ပြုရခြင်း မရှိတဲ့ လျှောက်လဲချက်ကို ပေးရမှာဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာဘာကို ဆိုလိုသလဲဆိုတော့ ဥပဒေအရ ခုခံပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝ မရှိဘူး၊ကန့်သတ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်နေတယ်။"ဟု
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
Posted by yahutha at 1:42 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ခြံဝင်း ကိစ္စ ကန့်ကွက်စာပ...
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ်၂လ(၇၄)လ ပြည်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၃ရက်နေ့ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာပါ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်လွတ်မြောက်နယ်မြေ (ဂျ...
Voice of Burma July 2009
မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေး ဂျပန် ရတက်မအေး။...
ရုံးချိန်းတွေ ဆက်ချိန်းနေတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သဘေ...
(NCGUB) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုလှတင့် ဂျပန်သတ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၂၂ရက်နေ့ တွေ့ခွင့်ရရန် ရှေ...
အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဥ...
အဖွဲ့ချုပ်ရုံး၌ ၆၂နှစ်ပြည့် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားေ...
၆၂နှစ်ပြည့် အာဇာနည်နေ့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ြ...
အာဇာနည်နေ့(သို့ ) နိူင်ငံတော် လုပ်ကြံမှုကြီး
ယနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှေ့နေများ ၂နာရီခန့်ေ...
အကျဉ်းသားတွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမည်ဟု နအဖ...
အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ...
၇ ဇူလိုင် စစ်သံရုံးရှေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ( ကိုရ...
ရှေ့နေများကောင်စီ ဥက္ကဌ ဦးသိန်းဦး နှင့် ကိုရီးယား...
ယနေ့ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ စစ်အခွန်ရုံးရှေ့တွင်...
မြန်မာပြည်မှာ တောင်နဲ့မြောက် ကွဲနေခြင်း။....။
DN! At Least 140 Killed in China Clashes
မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘောတစ်စီး ဆန်တင်ရန် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ...
UN SECRETARY BANKIMOON IN BURMA- 03 ,07, 2009
Japan's PM Meets U.N. Secretary General
သောကြာနေ့ည နောက်ဆုံးရ သတင်းများ။.....
၂ ရက်နေ့ည နောက်ဆုံးရ သတင်းများ။....။
ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန ရုံးရှေ့တွင် ပြုလုပ်...
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ်၁လ(၇၃)လ ပြည်...